„Inweta ego“ svetainė dienoraštyje „gị ọ dị mfe ịchụ“ ego karia ịmalite azụmahịa omenala ma ị gaghị eleba iwu iwu mkpochapụ anya ma ọ bụ tinye maka ikikere ụlọ.
Otu n’ime iwu iwu kachasị mkpa ma dị mkpa bụ iwu nzuzo, nke a na-emetụta weebụsaịtị, nnukwu ma ọ bụ paklusti. Na, o ne, obere azụmahịa ma ọ bụ ọbụnadị tinklaraštininkas na-enweghị ego svetainė na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ejighị n’aka ihe kpatara ụwa na mbụ ị ga-achọ otu, ị nwere ike ijuanya.
O dé elu nke na ị ga – adị (ọ bụrụgodị na ị maghị ya) – ichikota ụdị ozi dị iche iche site na ndị ọbịa gị, na – edebe ha nchịkọta, ma ọ bụ na – egosipụta mgbasa ozi. Maka ọtụtụ n’ime amhe ndị a, čia ndị dị elu dị elu nach achọrọ ka ị nwee iwu nzuzo.
1.1 Duomenys = Ego
1.2 Aš negaliu nieko nedaryti, bet apledėti
Jei tu esi choro bu darere nawu ma obu iwu ndi ozo. Ọzọkwa, nkọwa nke ihe bụ "ozi nkeonwe" dịgasị, mana ọ na-agụnye aha na adreesị email, na mgbe ụfọdụ, adreesị IP na kuki nchọgharị.
Duomenys = Ego
Na oge ọmụma, duomenys bụ ego ọhụrụ. Ozi nzuzo nke ndị mmadụ n’otu n’otu bara ezigbo uru nye ndị mgbasa ozi, ụlọ ọrụ, na gọọmentị.
Dịka ọtụtụ iwu nzuzo, we re re ike ike ikpebi ma ma bụ ụbụna na-eme mkpesa ma ọ bụrụ na ịnakọta ozi nkeonwe na-agwaghị ndị ọrụ gị, ma ọ bụ ma z buzruz na.
Aš negaliu nieko nedaryti, bet apledėti
„Iwu Nzuzo Australia“ (APP) bụ nchịkọta nke ụkpụrụ 13 na-eduzi njikwa ozi nkeonwe. Dịka ụkpụrụ ndị a si dị, ị ghaghị ijikwa ozi nkeonwe na ụzọ a na-emeghe na nke a na-emeghe.
Ntuziaka nchekwa data nke Europos Sąjungos duomenys 1998 m ekwu na onye ọ bụla nhazi duomenys nke onwe ya aghaghị ime ya n’ụzọ ziri ezi ma kwadoro. Iji mee ka nchịkọta duomenys buvo taisyti, kai dw ka iwu kwadoro, ga-anakọta duomenys nanị maka akọwapụtara nke ọma, nke doro anya na nke ziri ezi.
„Nzuzo UK na Usoro Ntanetị Electronic 2003“ na-egbochi ojiji nke kuki na teknụzụ ndị yiri ya na ngwaọrụ ndị ọrụ ọ gwụla ma ndị ọrụ 1) doro anya banyere nzube nke ojiji nke kuki na 2) enyewo nkwenye ha.
Iubena enyere ndị ọrụ dar žinomas kaip ịmepụta iwu nzuzo na nzọụkwụ atọ:
Tinye ọrụ (pvz., „Google Adsense“) ị na-eji na ụdị data ị na-anakọta,
Ịmepụta nzuzo nzuzo na asụsụ asatọ dị iche iche maka ebe nrụọrụ weebụ na nwwa ọdịnala na-eji Iubenda (lee ngosi).
Akụkụ kasị mma nke iubenda – iwu nzuzo gị ka akwadoro na sava ha. Nke a ptatara na usoro ahụ nwere ike ị mepụta ederede iwu mgbe ọ bụla iwu gbanwere.
„Karịa ọrụ 600“, „Facebook Like“, „Google Adsense“, „Google Analytics“, mygtukas „LinkedIn“, „Twitter“, „Alexa Metrics“, „Amazon Associates“; edozi ya na usoro ozo.
Azịza nkwụsị – Ee. Neišmeskite nė vieno žvilgsnio, o ne ij soro GDPR.
Na ego nke $ 39 / mėn (och!), Usoro ahụ ga-enyere dar žinomas:
Sočė, ndekọ, ma weghachite njirimara onye ọrụ na ngwaọrụ nchịkwa Nzuzo.
Parduotuvėje prekiaujama tik tais atvejais, kai niekas nebenaudojamas, o ne, o ne, bet ne, o ne, bet ne,.
Zọkwa – gụọ nyochaa Shopify anyify.
We dar ike ị pị "Hụ na ị ga-achọ ikpe ikpe" igbe ma mepụta iwu nzuzo gị n’efu.
Ụ ụ ụ ie ie we we we we we ike ị ị ị ị n n, i i i i i i ị k k k k blog blog blog blog blog blog blog blog blog Reallychọghị ihe ọ bụla ịchọrọ ka amachibido ya na netwọkụ Mgbakwunye gị ma ọ bụ ịbụ onye onye ọbịa websaịtị na-agba akwụkwọ.
„Chebe onwe gị site na iji otu n’me ngwaọrụ ndị dị n’elu iji mepụta iwu nzuzo gị ugbu a, ị gaghị echegbu onwe gị! Usoro ahụ ga-enyekwara gị dar žinomas kaip ịmata onwe gị na nkọwa bara uru na nzuzo onye ọrụ.
Njikọọsọ Inweta ego site na bloggịọdịmfeịchụego kariaịmaliteazụmahịaomenala maịgaghịeleba iwu iwumkpochapụanya maọbụtinye maka ikikereụlọ. Otúọdị、nkeahụapụtaghịna